Chirevo chaSachigaro weAfrican Union Commission nezvemamiriro ezvinhu muSouth Africa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » South Africa Breaking News » Chirevo chaSachigaro weAfrican Union Commission nezvemamiriro ezvinhu muSouth Africa
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • South Africa Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sachigaro weAfrican Union Commission, Moussa Faki Mahamat
Moussa Faki Mahamat anoshora nemazwi akasimba kuwedzera kwechisimba muKwazulu-Natal, Gauteng nedzimwe nzvimbo dzeSouth Africa.
Sachigaro anotumira nyaradzo yakadzama kumhuri dzevakauraiwa uye anoshuvira kupora nekukurumidza kune vakakuvadzwa
Sachigaro anoti kudzoreredza kurongeka, runyararo nekugadzikana munyika nekuremekedza mutemo.
Sachigaro anodzokorora kubatana kuzere uye kusingazungunuke kweAfrican Union
Commission nehurumende nevanhu veSouth Africa.
Sachigaro we African Union Commission, Moussa Faki Mahamat, anoshora nemutoo wakasimba kuwedzera kwechisimba kwakonzera kufa kwevanhuwo zvavo uye zviitiko zvinotyisa zvekubiwa kwepfuma yeveruzhinji neyevanhu, kuparadzwa kwezvivakwa, kusanganisira kumiswa kwebasa rakakosha Kwazulu-Natal, Gauteng nedzimwe nzvimbo dzeSouth Africa.
Sachigaro anotumira nyaradzo yakadzama kumhuri dzevakauraiwa uye anoshuvira kupora nekukurumidza kune vakakuvadzwa.
Sachigaro anoti kudzoreredza kurongeka, runyararo nekugadzikana munyika nekuremekedza mutemo. Anosimbisa kuti kukundikana kuita izvi kunogona kuve nemhedzisiro yakakomba kwete chete munyika asi Dunhu rese.